Mitomany ny alika amin'ny alina | Tontolo alika
Ny tolo-kevitry ny rehetra dia ny alika matory amin'ny toerany ary fahadisoana lehibe ny famelana azy ireo avy amin'ny alika kely hipetraka eo am-pandriana na eo amin'ny sofa malalantsika dia tsy maintsy manana ny fandriany na ny latabany izy ireo. Fa ny mahazatra dia raha manana alika kely isika dia mandany alina mitomany na mitrongy satria tsy hainy ilay toerana na satria matahotra ianao. Ary ny ratsy indrindra dia tsy reraka mihitsy izy ireo, indraindray mandany alina maromaro misesy mitomany sy mitomany.
Aza kivy anefa, hoy ny mpitsabo biby, mety haharitra fito andro vao zatra mifindra amin'ny tranony vaovao ny alika, ary ny alina voalohany no ratsy indrindra. Ny fanaovana azy ireo hatory miaraka amintsika alohan'ity vanim-potoana ity dia tsy manome antoka fa hitondra tena tsara izy ireo, ny mifanohitra amin'izay, rehefa miaraka aminy izy ireo dia hanana faniriana bebe kokoa hilalao sy hiala voly, ary tsy hianatra irery irery hatory. Raha mihaona mahita fahanginana kely isika, ny hany zavatra hananantsika dia ny alikakely izay efa mahalala fa amin'ny fitomaniana fotsiny dia hanao izay tadiaviny.
Hanome torohevitra vitsivitsy izahay mba hahafahan'ireto alika kely ireto miala sasatra am-pilaminana: tsy maintsy avelantsika izy ireo hijery ny tranony iray manontolo. Mametraha lamba na lamba firakotra eo am-pandriany izay misy fofona mamofon-dreniny. Ny fametrahana famantaranandro na famantaranandro fanairana eo akaiky eo dia hampahatsiahy azy ireo ny fitempon'ny fon'ny renin'izy ireo ny fanaovana tapakila mitohy ary hanome toky azy ireo izany. Ny fitazonana azy mafana eo am-pandriany dia hahatonga azy hahatsapa ho mahazo aina kokoa.
Raha hitanao fa rehefa mandeha ny andro, dia mitomany na kivy foana ilay alika, dia manoro hevitra anao izahay mba hanantona ny mpitsabo biby anao. Amin'izao fotoana izao dia misy vokatra simika isan-karazany, izay omen'ny matihanina iray, dia ho afaka hampitony izany alahelo izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Mitomany amin'ny alina ny alika
Ny hoditry ny alika